Esi gbanwee ntọala BIOS iji bido Linux si Live CD / USB | Site na Linux
Esi gbanwee ntọala BIOS iji bido Linux si Live CD / USB
Otu nke oké nzọụkwụ na- itinye n'etiti ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ na iji sistemụ ndị ọzọ eji arụ ọrụ na-abụkarị ntọala BIOS. paso mfe ma nkatọ y dị mkpa na nwaa e tinye nkesa ọ bụla Linux.
1 General okwu
2 Otu esi abanye na ntọala BIOS
3 Hazie mbanye buut
4 BIOS ochie
5 UEFI na urenọ ná Ntụkwasị Obi buut
Ozugbo ị mepụtara ndụ-cd ma ọ bụ ndụ-USB nke ọkacha mmasị gị, ọ ga-anọgide na-ahazi BIOS ka usoro akpụkpọ ụkwụ si draịva kwekọrọ.
Dịka nkọwa dị mkpirikpi, ka anyị kwuo na mgbe ịmalite kọmputa, ihe mbụ a na-ebufe bụ BIOS (Ntọala Ntinye / Ntinye Nhazi), onye ebumnuche ya bụ ime usoro ndị na-enyocha arụmọrụ ziri ezi nke ngwaike ma mechaa rụọ ọrụ ahụ sistemụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ihuenyo ahụ ị hụrụ tupu sistemụ arụmọrụ amalite (ma ọ bụ Windows ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ).
Ihe anyị ga-eme iji nwalee na / ma ọ bụ wụnye Linux bụ ịbanye na BIOS nhazi ihuenyo ma gwa ya na kama ịmalite sistemụ arụmọrụ nke arụnyere na diski ike, malite nke dị na ndụ anyị ma ọ bụ cd dị ndụ. , dika o nwere ike ịbụ.
Otu esi abanye na ntọala BIOS
O di nwute, enweghi uzo ozo iji mezuo oru a dika ihe nlere nke obula biara na BIOS ma o gha adighi ike ide akwukwo ndi nhazi nhazi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ekwe ka nghọta anyị bufee anyị, usoro a ga-adị mfe.
Iji mee nke a, mgbe ịjikọtara akụrụngwa na ozugbo ozi izizi malitere ịpụta, ị nwere ike pịa bọtịnụ «kwusi» iji kwụsị usoro buut wee hụ obi ike na - egosi na ihuenyo. A ghaghị ime nke a ngwa ngwa ebe ọ bụ na ozi ndị a kpọtụrụ aha na-ahụ naanị sekọnd ole na ole.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụsị usoro mmalite, jiri nlezianya lee anya na ihuenyo mbụ. Na ala nke ihuenyo a, a na-enwekarị akara yiri nke a: «Pịa F2 ịbanye SETUP». N'ezie, igodo ahụ nwere ike ịbụ nke ọzọ. Nke kachasị bụ: [DEL] ma ọ bụ [Del], [Fanye], [Esc], [F2], [F1], [F10] ma ọ bụ igodo ọrụ ọ bụla ọzọ.
BIfọdụ BIOS ndị dị ọhụrụ na-enye gị ohere ịhọrọ igodo ngwaọrụ site na iji igodo ọzọ, na-enweghị ịnweta ntọala ntọala BIOS. Nke a bụ n'ihi na ọ na-adịkarịkarị ịgbanwe ntọala ndị a yana n'ihi na nke a na-egbochi onye ọrụ ịme mmezi ọzọ na ndudue. Ọ bụrụ na BIOS nwere "ụzọ mkpirisi" a, jiri akụ na keyboard wee họrọ ngwaọrụ buutị kwekọrọ.
Nke a "ụzọ mkpirisi", agbanyeghị, na-arụ ọrụ maka mmalite 1; oge ọzọ sistemụ arụnyere na diski ike ga-ebu. Yabụ, imeghachi ya ọzọ, ka mgbanwe ahụ “bụrụ nke na - adịgide adịgide”, ma ọ bụ bụrụ na BIOS enweghị “ụzọ mkpirisi” ahụ ekwuru, ị ga - pịa igodo kwekọrọ iji banye na ihuenyo nhazi BIOS, nke nwere ike ịnwe akụkụ dị iche otu egosiri ebe a, ma ya na njirimara na uru ya.
Hazie mbanye buut
Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịnye ụkpụrụ nduzi n'ozuzu, ebe ọ bụ na ihuenyo ntọala BIOS dịgasị iche site na bọọdụ gaa n'ụgbọ. Agbanyeghị, n'okwu niile, ị ga-ahụ taabụ nke yiri "Boot" ma ọ bụ ntinye akpọrọ "Boot series" ma ọ bụ "Bụ ụzọ mbido" n'ime taabụ "izugbe" ọzọ nke ụdị "Advanced BIOS Features"
N'oge a ọ dị mkpa icheta na ọ bụ ebe a ka nzuzo buut. Nke a pụtara na anyị ga-eguzobe agbụ nke ihe ndị dị mkpa: nke mbụ, na ọ na-agba mbọ ịpụ site na cd ma ọ bụ eriri (dabere na anyị chọrọ ịnwale distro anyị); ọ bụrụ na ada ada, ọ na-agba mbọ ịbido sistemụ arụmọrụ arụnyere na draịvụ ike, were gabazie.
Tozọ ịhọrọ taabụ ma ọ bụ gbanwee ntọala dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe metụtara iji akụ, oge ndị ọzọ ị ga-eji igodo PgUp na PgDn, wdg. Agbanyeghị, na kọlụm n'aka nri ị ga-ahụ tebụl nkọwa na-egosi usoro ị ga-eso. Na okpuru, maka akụkụ ya, gosipụta igodo iji pịa iji rụọ ọrụ ndị a na-ahụkarị. A rudimentary ihe ọmụma nke English bụ iji ghọta ihe na-eme.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, chekwaa mgbanwe gị wee pụọ na mmemme ntọala. Iji mee nke a, ị ga-pịa igodo kwekọrọ (n'ihe banyere nseta ihuenyo gara aga, F10).
BIfọdụ okenye BIOSes anaghị abịa na nkwado maka ịwụ site na USB mbanye. N'okwu ahụ, nhọrọ kachasị mma na-abụkarị iji CD-ndụ iji nwaa Linux distro ịchọrọ. Agbanyeghị, ọ ga - ekwe omume ịmanye buutu site na USB (na - enweghị nkwado BIOS maka nke a) PLOP buut Manager.
Ndị ọzọ, BIOS ndị okenye anaghị etinye nkwado maka ịbido site na draịvụ CD-ROM. N'ọnọdụ ahụ, ihe okike ọzọ ga - abụ iji boot floppies, nke naanị ole na ole Linux Obere-distros nwee. Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na igwe ahụ nwere onye na-agụ CD, ọ ga-ekwe omume ịpụ na cd dị ndụ, ọbụlagodi na BIOS anaghị akwado ya, na-eji Smart buut Manager o PLOP buut Manager.
UEFI na urenọ ná Ntụkwasị Obi buut
Nkebi nke a gụnyere naanị kọmputa ndị ọhụrụ ahụ batara na UEFI arụnyere karịa nke ugbu a "BIOS". Maka ntụle, ikekwe ndị niile na-abịa na Windows 8 ma ọ bụ karịa nwere UEFI na urenọ ná Ntụkwasị Obi buut kwadoro site na ndabara, ebe ọ bụ na nke a bụ choro Microsoft nyere iji kọwaa ngwaike ahụ.
The Integrated Extensible Firmware Interface (UEFI) bụ a nkọwapụta na-achọ iji dochie ochie BIOS interface, nke ọtụtụ bụ kwa "iri asatọ" na a yiri akụkụ ka ochie DOS. Ke adianade do, ọ na-etinye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, nke na-enweghị ebumnobi nke isiokwu a, n'etiti nke a na-akpọ "boot boot" ma ọ bụ "nchekwa akpụkpọ ụkwụ" pụtara ìhè.
Nọ ná Ntụkwasị Obi buut na-egbochi kọmputa na-amalite sistemụ ma ọ bụrụ na buut Loader enweghị nti dijitalụ akwụkwọ, ngwaahịa nke aka ike mgbanwe nke obi koodu. N'ụzọ dị otú a, ụdị ọ bụla nke bootkit-malware agaghị enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Otú ọ dị, eziokwu ahụ Microsoft na-amanye ndị nrụpụta iji kesaa kọmputa ha na nhọrọ a nyeere iji nweta asambodo Windows 8 mepụtara nke ukwuu bido. Karịsịa, ọ na-echegbu onwe ya na atụmatụ a na-arụ ọrụ naanị ebumnuche nke igbochi ndị ọrụ ịmalite sistemụ arụmọrụ karịa Windows. N'okwu a, ihe achọrọ bụ ihe mgbochi karịa na ndị ọrụ, ọ bụghị atụmatụ nchekwa.
Dabere na Microsoft, enwere "nkwa" abụọ na nke a agaghị eme. N'otu aka, ị nwere ike iwepu ma UEFI (site na buut site na iji "ọnọdụ BIOS dakọtara", nke a makwaara dị ka "Legacy Boot") na Secure Boot. N'aka nke ọzọ, ikike nke Secure Boot chọrọ maka mbinye aka dijitalụ sitere n'aka ndị nweere onwe ha, nke na-abụghị onye nrụpụta ma ọ bụ Microsoft.
Eziokwu bụ na ugbu a nkesa Linux na-enye ha akpa inwe ike ịgba ọsọ na igwe na UEFI na Secure Boot nyeere.
Na ọnọdụ nke ugbu a, ọ kachasị mma iji gbanyụọ urelọ Nche echebe tupu ịwụnye Linux. Nkwado maka UEFI, n'aka nke ọzọ, emepụtara nke ọma, ọ bụ ezie na ọ ka nwere ntụpọ ụfọdụ. N'ihe banyere njehie, ọ gaghị enwe ihe ọzọ ma ịhọrọ "Legacy Boot" ma gbanyụọ UEFI.
Dual-boot nwụnye nke Linux n'akụkụ Windows 8, nke chọrọ iji ma UEFI na urenọ ná Ntụkwasị Obi buut, na-adịghị atụ aro n'oge a. Ka ọ dị ugbu a, ọ ga - ekwe omume - ọ bụghị na - enweghị isi ọwụwa - na - eji nsụgharị ndị kachasị ọhụrụ nke nkesa ndị kachasị ewu ewu - gụọ Ubuntu 12.10, Fedora 18, wdg. n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Esi gbanwee ntọala BIOS iji bido Linux si Live CD / USB
Daalụ nke ukwuu maka nkuzi ahụ, zuru ezu. Ọtụtụ ga-eme nke ọma.
Ihe edeturu, iji hụ ma ọ bụrụ na onye maara ọtụtụ ihe na-agba ume ma na-eme nkuzi nke nhọrọ kachasị dị iche iche anyị nwere ike ịchọta iji jikọta ya na bios, yana ihe onye ọ bụla n'ime ha bụ.
A bụ m otu n’ime ndị ahụ dabara gị. Ana m esonyere n'usoro !!!
Ugbodo 23 dijo
lee ezigbo onyinye ọ bụ nnukwu enyemaka
na oburu na obu imac ka esi hazi ya bido na cd?
Eziokwu bu na amaghm ma echere m na o gha enye gi ohere ịbanye bios ma gbanwee nke a, nri?
Anaghị m anwa anwa bulite linux live cd na windo 8 pc
Amaghim ihe aga eme, biko nyerem aka 🙁
Rịba ama na enyere nkọwa zuru ezu banyere otu esi eme ya n'isiokwu ahụ.
Ozugbo enwetara BIOS (dika akọwara ya n’isiokwu a) ikwesiri idetuo ihe nkesa Linux ahu na pendrive (iji unetbootin ma obu ihe yiri ya) ma bido igwe na pendrive.
Ọtụtụ "nkọwa" na-abaghị uru - ọ dị ka ọ chọrọ igosi onwe ya "ole ka ọ maara" yana obere ozi na nkọwa iji malite ndụ cd, dịka o kwere nkwa ma nwee mmasị n'ịmụ ihe ... anyị ga-aga n'ihu na-achọ saịtị nke ahụ dị ntakịrị ịnweta ndị ọrụ nkịtị ..
Kedu ihe ị chere na-efu? Nwere ike ịkọwapụta nke ọma?
Nke a bụ isiokwu enwere ike ịmekọrịta naanị n'ozuzu ya n'ihi na BIOS ọ bụla dị iche.
Ekele, ekele maka onyinye ahụ, naanị na ọ dị m mkpa ka m wụnye Win na Canaima, ebe ọ bụ na m ga-arụ ọrụ na ngwa ndị na-anaghị ahapụ maka Canaima, nkọwa bụ na mgbe m gbalịrị ịbanye Win installer, ndị Canaima malitegharia, a gwara m na m ga-agbanwe nhọrọ na bios, njikwa SATA ... mana ọ pụtaghị! Ihe m nwere ike ime ??
Na-achọ ihe ọmụma na Live CD na GNU / Linux Achọtala m ozi m hụrụ n'anya nke na-atọ m ụtọ ikpochapụ obi abụọ (ọkachasị maka ndị ọhụrụ dịka m). Ọ bụ na njikọ ndị a:
Ana m ekele gị nke ukwuu maka edemede a.
Ọ bụghị dijo
Nnọọ! Daalụ nke ukwuu maka ozi ahụ, ọ dị ka ọ zuru oke ma nwee nghọta. ….
Lee gị mgbe e mesịrị ekele!
Ana m arụ ọrụ na Legacy Bios ma na-egbochi UEFI. Nkwụsi ike na CentOS7.
Ọ dịla onye wụnye Linux na dell inspiron na Bios A05
Otu ajụjụ, iji wụnye Linux na diski ahụ, site na USB, ị ga-agbanwe diski diski (USB karịa diski diski) site na bios ma ọ bụ na m si na UEFI, emeela m mgbanwe niile achọrọ ma wụnye. Linux mebere nchekwa UEFI nke mere na diski buut bu eriri ma ọ bụ na a ga-agbanwe ya iji bido ya na diski ike, n'ihi na m nwekwara mmeri 8 arụnyere na ụlọ ọrụ ahụ, enwere m ike ịbanye na UEFI site na windo ma mee mgbanwe niile. , kwa, amaghim ya Linux iso (nke m choro iji wunye bu ubuntu 16.4.1) ga abia na multi-Starter, iji choputa ka imalite windo ma obu ubuntu.
Lee… M na-anwa ịwụnye windo 7 site na USB na laptọọpụ na UEFI. M na-abanye ya ma hazie ngwaọrụ buut na mgbakwunye iji gbochie UEFI Boot ma na-enyere Legacy buut aka. Ọ zuru oke na-amata USB ebe nchekwa na sistemụ arụmọrụ nwere ma ọ dịghị buut ya n'oge ọ bụla. Na windo nhọrọ buut m na-ahọrọ ebe nchekwa ahụ ọ na-anọ ruo nwa oge na ihuenyo ojii na laptọọpụ malitegharia ma enwebeghị m ike ịmalite mmemme nrụnye ... M gbalịrị nkesa Linux, nke m na-enweghị ike ikwu ihe ọ bụ ma na aha anyị nwere ike ịchọta ihe dị ka Debia na 4.1 nke m jibu na mbụ tinye na enweghị nsogbu na kọmputa ndị ọzọ. eziokwu bụ na na ihe nlereanya a nke laptọọpụ na m na-ama gafee ọtụtụ ọ na-adịghị ka m na-amalite si cd m edozi site wụnye sistemụ na ndị ọzọ yiri nke ahụ na-enyefe ndị disk ka nke mbụ ma m ga-achọ mara ma ọ dị ụzọ ọ bụla iji dozie obere ihe a enwere m nsogbu ... ọ bụrụ na mmadụ maara etu esi edozi nke a ma were nsogbu gụọ okwu m, m ga-enwe ekele maka ya
The "Bios" kwuru n'elu Phoenix securecore
Zaghachi Enrique Romero
Ndewo, azụrụ m toshiba satllite NB10t-AF na windo 8. Akwụkwọ ikike ahụ agwụla, m gbalịrị ịwụnye ubuntu. Agaghị ekwe omume. M wepụrụ echekwa ihe buut ihe ... M arụnyere ubuntu si pen na nkebi m chọrọ .. N'ihi. mgbe ị na-agwụcha wụnye, regharịa ọfụma, ubuntu na-arụ ọrụ. M gbanyụọ. Ana m agbanye ọkụ ma ọ naghị aga.
na-elele mgbasa ozi n'ihu ...
enweghị mgbasa ozi ...
(na mgbe ahụ) reboot ma họrọ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ tinye mgbasa ozi buut na ngwaọrụ buut ahọrọ ma pịa igodo
ma ọ gaghị ekwe omume ịpụ ebe ahụ.
ọ bụrụ na ọ mata mkpịsị odee, enwere m ike iji sistemụ arụmọrụ site na pen, mana ọ dị ka ọ bụrụ na ọ naghị amata ya na diski ike. echiche ọ bụla?
Enwere onye nwere ike inyere m aka m gbalịa ịwụnye Linux canaima na pc m na mmeri 7 na mgbe ị na-etinye canaima ọ na-egosi «mmalite canaima» na m na-enye ebe ahụ ma mgbe sekọnd ole na ole pc malitegharia ọzọ? ụfọdụ ngwọta biko….
Zaghachi nye samir